Training/Education | MyanmarJobsDB
University of Southampton နှင့် ဗြိတိသျှကော်စီတို့မှ ပူးတွဲပို့ချမည့် “Understanding Language: Learning and Teaching” အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းအားနိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းသည်
Any Graduate (LCCI Level II,III), B.com, ACCA, DA စသည်တို့ကိုတက်ရောက်နေဆဲ ကျောင်းသား/သူများ၊ အောင်မြင်ပြီးသူများ၊ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများ၊ အတွေ့အကြုံရှိပြီး Final Account မဆွဲနိုင်သူများအတွက် Daily Transaction မှ Final Account ထိ Full Set ရေးဆွဲနိုင်ရန်
PROGINEER Co., Ltd မှ ကြီးမှူး၍ အရည်အသွေးပြည့်ဝကာ ကျွမ်းကျင်ထက်မြက်သော Web နှင့်
Mobile Developer များမွေးထုတ်ပေးရန်ရည်ရွယ်လျက် နိုဝင်ဘာ (၁) ရက်နေ့မှစပြီး
နောက်ဆုံးပေါ် နည်းစနစ်များကို အခြေခံကာသင်တန်းများ ပို့ချပေးသွားမည်။ စာတွေ့
လက်တွေ့များကို ထိထိရောက်ရောက် သင်ယူနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ သင်တန်းတခုလျှင် လူဦးရေ (၁၀)
ဦးသာ သတ်မှတ်ထားသည်။ သင်တန်းအမျိုးအစားများမှာ ASP.Net (Foundation) ,ASP.Net
(Advance) နှင့် Mobile Development (Android) တို့ ဖြစ်ပြီး မိမိ
စိတ်ဝင်စားမှုပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးချယ်တတ်ရောက် နိုင်ပါသည်။ သင်တန်းတခုစီတိုင်း အတွက်
Study material, Video training , Sample Projects, Study road map များအား
သင်တန်းအထောက်အပံ့ တခုအနေဖြင့် ပေးအပ်သွားမည်။
စိတ်ပါဝင်စား သူများ အနေဖြင့် PROGINEER Co., Ltd ဖုန်း (၀၉-၃၁၇၈၅၄၄၇) ၊ လိပ်စာ (အခန်းမှတ် ၃၀၃၊တိုက်၄၁A,စံပယ်ကွန်ဒို၊ စံပယ်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့) သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Computer Programming Language ကိုစတင်လေ့လာလိုသူများနှင့် C,C++ စသော Programming Language ကိုလေ့လာသိရှိပြီးသူများအနေနှင့် Java Programming Languageကိုစိတ်ဝင်စား လေ့လာလိုသူများအတွက် Java နည်းပညာသင်တန်းအား
Technical Manager - Male For FMCG Co., Ltd with Attractive Salary (169 views)
Accounts Assistant (169 views)
Marketing Staff – M/F5posts (URGENT) (143 views)
URGENT!!! Accountant (139 views)
URGENT APPLICANTS NEEDED IN USA TEXAS/FREE VISA APPLY (137 views)
Web Application Engineer (Junior) (136 views)
URGENT!!! Sales Supervisor (127 views)
Senior Php Developers (127 views)
Maintenance Engineer - Male For FMCG Co., Ltd with Attractive Salary (125 views)
Digital Marketing (122 views)